Ezonyango-I-AOOD Technology limited
Ukuchaneka nokuthembeka yimishini yezixhobo zonyango kunye nezixhobo. Kuzo zonke ezi nkqubo, babeka imfuno engqongqo kwiisysystems zabo nakumacandelo. Iringi yesiliphu njengenxalenye ye-electromechanical eyenza ukuhanjiswa kwamandla / uphawu / idatha ukusuka kwindawo emileyo iye kwinxalenye ejikelezayo, kubalulekile kwimpumelelo yayo yonke inkqubo yokuhambisa.
I-AOOD ibinembali ende yokubonelela ngezisombululo zeringi yesicelo sonyango. Ngobuchwephesha bobuchwephesha bamva nje, ukuqhubekeka kwezinto ezintsha kunye nobuchule obunobunkunkqele, i-AOOD isebenzise ngempumelelo ukugqwesa okuthembekileyo kunye nokuthembeka kokutyibilika kwamakhonkco ukusombulula amandla / idatha / ukuhanjiswa komqondiso kwizikena ze-CT, iinkqubo ze-MRI, isisombululo esiphakamileyo se-ultrasound, iinkqubo ze-digital mammography, ii-centrifuges zonyango, izinto zokuhombisa kunye nokubonisa ukukhanya kwezibane kunye nokunye.
Elona tyala liqhelekileyo ziinkqubo ezinkulu zeringi yesilayidi ye-CT. Iskena se-CT sidinga ukuhanjiswa kwedatha yomfanekiso ukusuka kumatshini ojonga izixhobo ze-x-ray ojikelezayo usiya kwikhompyuter yolwazi lwedatha kwaye lo msebenzi kufuneka wenziwe ngeringi yesiliphu. Le ring yesiliphu kufuneka ibe nobubanzi obukhulu obungaphakathi kwaye ingadlulisela isixa esikhulu sedatha phantsi kwesantya esiphezulu sokusebenza. I-AOOD yeringi enkulu yesiliphu esisixa sayo yile: ngaphakathi ubukhulu bunokufikelela kwi-2m, ukuhanjiswa kwedatha yomfanekiso kunokufikelela kwi-5Gbit / s ngesitayile se-fiber optic kwaye inokusebenza ngokuthembekileyo phantsi kwe-300rpm ngesantya esiphezulu.
Iimveliso ezinxulumene noko: Amakhonkco amakhulu eSlip Bore, Ngokusebenzisa Imisesane yeSlip Bore